ANDRAVOAHANGY - MPANENDAKA TRATRA : Nahitana ody gasy tany anaty akanjony
Manao rano lava ny fahatrarana mpanendaka eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Miseho amin’ny endriny maro ny tranga ka tamin’ity fotoana ity indray izao dia tra-tehaky ny Polisy ireo ody gasy fampiasan’izy ireo, entiny hanariana saina ireo olona robaina. 12 septembre 2019
Raha ny loharanom-baovao voaray bebe kokoa mahakasika ny zava-niseho dia tovolahy iray no voasambotry ny Polisy mpanao fisafoana avy ao amin’ny CSP8 Analamahitsy ny alatsinainy 09 septambra 2019 lasa teo, teny Andravoahangy, raha vao avy nangarom-paosy tokony ho tamin’ny 1 ora maraina. Polisy nanao fisafoana no nanatonan’ilay vehivavy ka nitantarany izay nanjo azy.
Nambarany fa nisy tovolahy maromaro nangarona ny paosiny ka lasan’izy ireo tamin’izany ny findainy ary mbola hitany ao Andravoahangy ireo mpangarom-paosy ireo. Nandray andraikitra avy hatrany ny polisy hitady ireo olon-dratsy. Vao nahita ny polisy nanatona azy anefa ireo olon-dratsy niisa efatra dia vaky nandositra avy hatrany. Raikitra ny fifanenjehana ka voasambotra ny iray tamin’izy ireo. Nandritra ny fanadihadiana ity voasambotra ity no nahitana ilay ody gasy mipaingotra tao anaty akanjony entiny hanaovana fandraikiraikena amin’ireo olona haroniny paosy. Fantatra ihany koa fa efa nifonja noho ny resaka halatra izy ny taona 2018. Ireo namany izay tafatsoaka niaraka tamin’ilay finday halatra kosa dia mbola karohina fatratra amin’izao fotoana izao.